व्यापारिक निर्णयहरू बनाउन भौगोलिक जानकारी प्रयोग गर्दै
व्यवसायिक निर्णयहरू कसरी जगेडा भौगोलिक इन्फर्मोन प्रयोग गर्नुहोस्
व्यापार भौगोलिक क्षेत्र व्यवसायमा रहेको क्षेत्र हो जुन भौगोलिक प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्ने व्यवसाय, व्यापार, र आदर्श साइट चयनको लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्दछ।
भूगोलसँग सम्बन्धित सबै भन्दा सामान्य प्रयोग गरिएको उपकरण व्यवसाय भौगोलिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको नक्सा म्यापिङ हो - खासगरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोग, जसलाई GIS भनिन्छ ।
व्यापार भौगोलिक प्रयोगका अनुप्रयोगहरू
पहिचान गर्ने बजारहरू
व्यवसायमा एक महत्त्वपूर्ण पहल लक्षित मार्केट वा "ग्राहक म्यापिंग" को पहिचान हो। भूगोल र म्यापिङ सम्भावित ग्राहकहरू प्रयोग गरेर, आफ्नो बजार पहिचान गर्न खोज्ने सबै भन्दा राम्रो संभावित ग्राहकहरूको उच्चतम एकाग्रता पाउन सक्छन्। GIS यो म्यापिङलाई कुशल तरिकामा पूरा गर्न अनुमति दिन्छ र यो उपकरणबाट सिर्जना गरिएका नक्शाहरू ग्राहक साक्षरता पहिचान गर्न रङ-कोडिङ हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, यदि बालबालिकाको कपडा पसलले स्थानान्तरणमा विचार गरिरहेको छ किनभने यो व्यवसायको आदर्श मात्रा नपुगेको छ जुन पसलले बच्चाहरु को जनसंख्या को लागी शहर मा आफ्नो लक्षित आयु समूह मा नक्शा गर्न सक्छ वा क्षेत्र मा जान्छ। त्यसपछि डेटा जीआईएसमा राख्न सकिन्छ र अचम्मको एकाग्रता परिवारका लागि अन्धकारको प्रयोग गरी म्याग्दी र हल्का रङका साथ म्याग्दीको प्रयोग गरी म्यापहरू बिना। एकपटक पूरा भएपछि, नक्साले त्यस कारकको आधारमा कपडा भण्डारको आदर्श क्षेत्रहरूलाई हाइलाइट गर्नेछ।
सेवा आवश्यक छ भने निर्धारण गर्दै
ग्राहक म्यापिङ जस्तै, यो व्यवसायको लागि महत्त्वपूर्ण छ जहाँ सम्भवतया बिक्री नम्बरहरू प्राप्त गर्न सेवा आवश्यक छ। म्यापिङ प्रयोग गर्दै विभिन्न प्रकारको ग्राहकहरूलाई सजिलै पहिचान गर्न अनुमति दिन्छ कि यो क्षेत्रलाई व्यापार वा सेवा चाहिन्छ भने हेर्नको लागि।
उदाहरणको लागि, एक वरिष्ठ केन्द्र लिनुहोस्।
किनभने यो एक विशेष सेवा हो यो वरिष्ठ नागरिकहरूको उच्च अनुपात संग एक क्षेत्र भित्र स्थित हुन महत्त्वपूर्ण छ। ग्राहक म्यापिंग जस्तै बालबालिकाको कपडा भण्डार उदाहरण प्रयोग गरेर शहरमा वरिष्ठ नागरिकहरूको उच्चतम अनुपात सजिलै चिन्न सकिन्छ। यसैले, ठूलो वरिष्ठ आबादी वाला क्षेत्र यस सेवाको बिना अर्को समूहको भन्दा बढि सेवाको आवश्यकता पर्नेछ।
समान क्षेत्रमा अन्य सेवाहरू पहिचान गर्दै
एक अर्को समस्या जो कहिलेकाहीं व्यवसायमा हुन्छ त्यहीं दुई प्रकारका सेवाको स्थान एउटै क्षेत्रमा छ। प्रायः ग्राहकहरू र / वा प्रयोगकर्ताहरू (वरिष्ठ केन्द्रको अवस्थामा) लिनु एकैछिन बाहिर अर्को ड्राइव गर्न सक्दछ। उदाहरणको लागि यदि एक शहरी क्षेत्रमा पहिले नै हट कुत्ता कार्ट हो भने, अर्को ग्राहकले अर्को समर्थनमा नपठाउँदासम्म पर्याप्त ग्राहकहरू दुवैलाई समर्थन गर्न नभएसम्म एक नयाँ खोल्न हुँदैन।
व्यापार भौगोलिक रूपमा सबै व्यवसाय वा एक निश्चित प्रकारको सेवाहरू शहरमा म्याप गर्न सकिन्छ। GIS प्रयोग गरेर , लक्ष्य ग्राहकहरूलाई उदाहरणका लागि हालको हट कुत्ता स्ट्यान्ड स्थान देखाउने तहको शीर्षमा राख्न सकिन्छ। परिणाम नयाँ स्ट्यान्डको लागि उत्कृष्ट स्थान हुनेछ।
व्यापार भौगोलिकहरूले व्यवसायहरूलाई पनि उनीहरूको बिक्रीमा भौगोलिक ढाँचाको विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। यी ढाँचाहरू पहिचान गर्न, व्यापार प्रबन्धकहरूले निश्चित क्षेत्रहरू हेर्न सक्छन् जहाँ मान्छे विभिन्न उत्पादनहरू खरीद गर्छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि क्रीम संग कफी को विरोध को रूप मा, काली कफी, को चोटियों को कुनै अन्य तरिका पहचानात्मक नहीं हुन सक्छ। यस्ता कुकहरू को पहिचान गरेर विभिन्न वस्तुहरूको बिक्रीमा एक श्रृंखलामा धेरै कफी घरहरू मार्फत, चिनियाँ प्रबन्धकले विभिन्न स्थानहरूमा कुन वस्तुहरू राख्न सक्दछ भनेर निर्धारण गर्न सक्छ। यसो गर्दा, श्रृंखलाको व्यवसाय अधिक कुशल हुन सक्छ।
बजार आवश्यक छ भने एक सेवा आवश्यक छ, र एक क्षेत्रमा अन्य समान व्यवसायहरूको स्थान पहिचान गर्न साइट चयन को सबै भाग - व्यवसाय भौगोलिक क्षेत्रमा एक प्रमुख भाग। तथापि साइट चयन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ, आय, सामुदायिक विकास दरहरू, उपलब्ध कर्मचारीहरू, र सडक उत्पादन, उत्पादन र अन्य उत्पादनको लागि सडक, पानी र अन्य सामग्री जस्तै भौतिक विशेषताहरू हुन्।
GIS प्रयोग गरेर यी प्रत्येक कारकहरू एक-अर्कामा तहमा राख्न सकिन्छ। परिणामस्वरूप नक्साले व्यापार प्रबन्धकहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानदण्डको आधारमा सर्वोत्तम सम्भावित साइटलाई हाइलाइट गर्नेछ।
माथि सूचीकृत व्यापार भौगोलिक प्रयोगका लागी (माइनस साइट चयन) मार्फत सबै योजनाहरू मार्केटिङ प्लानको निर्माणमा पनि मद्दत गर्दछ। एक पटक व्यवसाय निर्माण भएपछि, यो महत्वपूर्ण छ कि लक्षित लक्ष्य मा विज्ञापन को प्रभावी ढंग देखि विज्ञापन गर्न को लागी। GIS प्रयोग गरेर र नक्सामा एक नक्शाको बजार पहिचान गर्न र यसको भित्र ग्राहकहरू पहिचान गर्न, भण्डार द्वारा प्रदान गरिएका उत्पादनहरूले बजार क्षेत्रमा विशिष्ट अनुरोधहरूसँग मेल खान सक्छ।
जनसंख्याको लागि उत्पाद र सेवाको प्रस्तावको कुशल बिक्री विश्व अर्थव्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण भाग हो। व्यापार भौगोलिक प्रयोग गरेर, व्यवसाय पत्ता लगाउने र यस्तो सामान बेच्ने कार्यको आरोपमा ती सबै भन्दा राम्रा तरिकामा यो गर्दै छन्। नक्शाहरू प्रयोग गरेर, व्यवसाय प्रबन्धकहरूले पनि धारणालाई अझ बलियो बनाएका छन् कि नक्शाहरू उत्कृष्ट ग्राफिक औजारहरू बनाउँछन्।
रिमोट सेन्सिङको एक अवलोकन
क्यान्सरको ट्रोटिकको भूगोल
के यो अक्षांश वा देशान्तर हो? सिक्नुहोस् कसरी फरक पार्नुहोस्
राज्यको उपनामहरूको एक विस्तृत सूची
संघको लागि महिला जासूस
आईबी प्राथमिक वर्ष कार्यक्रम को मार्गदर्शन
SUNY ओल्ड वेस्टबर्न प्रवेश
ब्राउन रिक्लुज स्पाइडर
गोल्फ कोर्समा 'फोर्ट नौ' र 'ब्याक न'
पानीको रंगमा पेंसिलको साथ क्रिसमस होलीलाई आकर्षित गर्नुहोस्
कन्फिडरेसीको महिला जासूस
गोशेन कलेज प्रवेश
प्रयोग हुने डुङ्गा किन्नका लागि उत्तम वेबसाइट
टिभीको सर्वश्रेष्ठ ड्रैमेडीज
यूसुफ कन्रेराद द्वारा "डार्ट ऑफ़ हार्टनेस" बाट उद्धरण
कुत्तों र बिल्लियों को लागि दन्त चिकित्सा
मर्कूसको अनुसार सुसमाचार, अध्याय 10
चीजहरू प्रस्ताव कसरी गर्ने?
Bering Land Bridge को भौगोलिक अवलोकन
प्राथमिक विद्यालयहरूको लागि हेलोवीन पार्टी विचार
शीर्ष 10 यो-यो म्या एल्बमहरू
9-9 फोटोहरू - वास्तुकलामा एक आक्रमण
स्क्युबा डाइविंग टैंकमा के छ?
एलिजाबेथ वान लुई